Toekaren'i Roanda - Wikipedia
Ny toekaren' i Roanda dia toekarena isan' izay nivoatra indrindra aty Afrika taorian'ny fampihavanam-pirenena sy ny firosoana amin'ny demôkrasia ary ny fampiharana ny fahaiza-mitantana tao aminy. Ny ady an-trano tao amin'ity firenena ity dia namotika ny toekareny ka naha lasa firenena mahantra indrindra an' i Roanda tamin'ireo taona 1990. Ny vola ampiasaina ao Roanda dia ny farantsa roandey (franc rwandais) avoakan’ny Bakim-pirenenan’i Roanda izay naorina tamin’ny taona 1964.
1 Ny fambolena sy ny fiompiana
2 Ny harena an-kibon’ny tany sy ny taozava-baventy
2.1 Ny harena an-kibon’ny tany
2.2 Ny taozava-baventy
3 Ny fifanakalozana
3.1 Ny fanafarana entana
3.2 Ny fanondranana entana
3.3 Ny lalana sy ny seranam-piaramanidina
Ny toekaren’i Roanda dia mifototra amin’ny fambolena izay sahanin’ny 82%n’ny mponina afaka miasa, talohan’ny taona 1994. Miantoka ny 41%n’ny PNB sy ny 90%n’ny vola miditra amin’ny alalan’ny fanondranana entana izany. Ny ampahany be amin’ny tany voavoly, izay mameno ny antsasaky ny velaran-tanin’i Roanda, dia atokana ho an’ny voly fihinana eo an-toerana toy ny tsaramaso maina (21 %), ny vomanga (14 %), ny ampemba (9 %), ny akondro be tavolo ary ny mangahazo. Ny velaran-tany sisa kosa dia natokaba ho an’ny voly fanondranan toy ny kafe arabika. Ny dite dia any aminn’ny laharana aoriana lavitra nefa ny varotra dite dia misahana ny 1,2% raha 2,2 % ny an’ny kafe.
Misahana ampahany kely kokoa amin’ny toekaren’i Roanda ny fiompiana. Miompy ondry sy osy ary omby ny tantsaha roandey. Ny fodian’ny mpitsoa-ponenana totsy mpiompy dia nampihena ny velaran-tany tokony hambolena.
Ny harena an-kibon’ny tany sy ny taozava-baventy[hanova | hanova ny fango]
Ny harena an-kibon’ny tany[hanova | hanova ny fango]
Ny harena an-kibon’ny tany dia ahitana ny kasiterita (ahazoana firapotsy), ny tongstena, ny berila ary ny volamena. Ahitana otrika etona voajanahary ny ao ambanin’ny farihy Kivu. Ambany dia ambany sady tsy misy fandaminana ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany dia noho ny zava-nitranga talohan'ny firosoan'ny Roanda mankany amin'ny demôkrasia. Teo antenantenan’ireo taona 1980 dia nahatratra 1 160 tônina ny famokarana firapotsy, 300 tônina fotsiny izany tamin’ny taona 2004. Ny berila sy ny tongstena ary ny volamena no manarakaraka izany.
Ny fampiasam-bola goavana amin’ny fotodrafitrasa izay nataon’ny Société minière du Rwanda (Somirwa) teo anelanelan’ny taona 1977 sy 1981, indrindra ny fanamboarana ny orinasa fampiempoana firapotsy tao Kabuy, dia niteraka fatiantoka noho ny fitontonganan’ny toekarena maneran-tany.
Tamin’ny taona 2005 dia latsaky ny 4 %n’ny Roandey no mampiasa herin’aratra an-tokantrano fa nitombo 30 % izany tamin’ny taona 2018. Nandroso vokatry ny fitombon’ny mponina an-tanàn-dehibe ny fandraharahana momba ny fanorenan-trano, indrindra ny ao Kigali.
Ny entana toy ny fiarakodia, ny solika sy ny etona, ny lamba sy ny fitaovana hafa dia hafarina avy any Belzika, any Kenia, any Frantsa ary any Japàna. Ny fanafarana entana dia tena ambony: 286 000 000 dôlara amerikana tamin’ny taona 1993, 325 000 000 dôlara amerikana tamin’ny taona 1996. Nitombo izaitsizy ny vola lanina amin’ny fikarakarana ny tafika: 0,1 % amin’ny tenti-bidin’ny entana hafarina tamin’ny 1990 raha 26 % izany tamin’ny taona 1991. Tamin’ny taona 1992 dia tombanana ho 35%n’ny tetibolam-panjakana ny fandaniana natao momba ny tafika.
Ny fanondranana entana (izay tombanana ho 102 600 000 dôlara amerikana tamin’ny taona 1990 ary 94 000 000 dôlara amerikana tamin’ny taona 1993) dia 154 000 000 dôlara amerikana tamin’ny taona 1996. Laharana fahenina eran’i Afrika i Roanda amin’ny famokarana dite tamin’ny taona 2010. Ireto ireo mpiara-miombona antoka momba ny fanondranana entana: i Kenia, i Sina, Tailandy, i Alemaina, i Etazonia, i Belzika ary firenena hafa ao amin’ny Vondrona Eorôpeana.
Singa mamaritra ny toekaren’i Roanda ny fitokana-monina. Ny lalana dia mirefy 14 000 km nefa 7 % ihany no azo aleha mankany amin’ny tanin’i Oganda sy ny an’i Kenia. Ny ankabetsahan’ny entam-barotra avy any Roanda na miditra any dia mijanona ao amin’ny serana-tsambon’i Mombasa ao Kenia aloha. Tsy misy ny lalam-by. Ao Kigali renivohitra no misy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena lehibe. Ankeitriny (2020) dia 90 %n’ny lalana no voarakotra tara.
Gôrila vavy sy ny zanany ao amin'ny Volcans National Park ao Roanda
Mandroso ny fizahan-tany any Roanda : tamin’ny taona 2011 dia nisy mpizaha tany miisa 723 000 (izany dia fitomboana 3 % raha oharina amin’ny taona 2010). Tafakatra 932 000 izany tamin’ny taona 2016, indrindra tamin’ny famporisihana ny mpampiaza vola amin’io sehatra io nataon’ny fitondram-panjakana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Toekaren%27i_Roanda&oldid=998340"
Voaova farany tamin'ny 31 Oktobra 2020 amin'ny 01:27 ity pejy ity.